GUS8 EPISODE2: Camp ọkọkpọhi akpali mgbe Chigozie na 'Dora epupụta
Site: Busayo October 30, 2011
Ụnyaahụ bụ na-akpali nakwa dị ka kemmeochi dị ka n'asọmpi wetara ọtụtụ aghụghọ na antics. Na Marywealth na Kike ahapụ ha mara ụlọikwuu mgbe ha nchupu ke akpatre ọrụ, Marywealth kpebiri ịhapụ a gaa nke ọma onyinye ụmụnna ya Ndị contestant site agbapụtara nkwu mmanụ na agwa ha na e were ya iri mgbe na-abịa azụ ebe nke ndi-ekwu okwu drum.
ya mere; ma ọ bụrụ na ọ na-agaghị eri n'ime ndị agwa, mgbe ahụ ọzọ contenstants agaghị enweta ya. Dị ka ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ ezughị, ọ na-ekpe Sandra na a onyinye e nyere ya site Nrịrọ ya jaket na ya uwe ya n'ime mmiri n'ihi na Sandra mere a comment nke na ọ gaghị echefu ịkpọrọ ya Marina Die on ya ụzọ ndị na-ekwu okwu drum (Na-Marywealth ịbụ abọ ọbọ ma ọ bụ dị nnọọ ịbụ na-akpa ọchị?)
Ọ bụ nnọọ ekwo ekworo ma na ọ chọrọ ka m gaa ma M gaghị – Sandra kwara arịrị.
Mgbe asọ mpi kpebiri nwere a zoo nke ike (nke ike kwere dịrị) n'etiti oke na nwunye contestant, ha gaba ebe ihe ịma aka na e suprised ịhụ Bob Manuel, na arịlịka maka mbụ na nwunye. Bob cordinated ọrụ nke na-agụnye ndị contestant ndị guzo ya n'akụkụ a chọrọ acha ọkọlọtọ nke ha nhọrọ. N'asọmpi na-agba ọsọ dịtụ anya gafee iyi ugboro atọ na atọ dị iche iche ebe ka eburu a agba ha ọkọlọtọ.
Na njedebe, Tony merie, sochiri Chris, mgbe ahụ Anthony na n'ikpeazụ Sandra.
Hence Chigozie (Tony si mara ụlọikwuu nwunye) na Dora a chụpụrụ. On kpatara ha atọpụ, Chigozie ata ụta ya na eziokwu ahụ bụ na ọ dara ugboro abụọ n'ụzọ mgbe Dora na ekwu ọ kwụsịlata mgbe elbowed ya na ihu n'oge egwuregwu.
Mgbe o rutere mara ụlọikwuu mgbe ha (Chigozie and Dora) a chụpụrụ na ntụpọ, ha hụrụ nkata nke ihe oriri na diming ya ikenenke, ha kpebiri izo nri n'okpuru a rafia ute mgbe unsucessfully agbali tinye ya na n'elu ụlọ nke ha mara ụlọikwuu (nke ha mebiri emebi na usoro).
Mgbe ndị ọzọ na-asọ mpi wee, ha wee “crazy” mgbe a ga-nri na ihe Tony Agbabara kwupụta na nkata naanị ịhụ ihe yabasị na a nkume. Ha nile emechu ihu.
Dị ka a n'ihi nke a, ha kpebiri esi nri agwa mgbe ha na-eleghara anya ịrụzi elu ụlọ ma mgbe mmiri ozuzo malitere kpamkpam, a manyere ha ịrụzi elu ụlọ na ndị fọdụrụ n'ọbụ aka aka ụtọ. Dị ka Tony ji nkwụ ụtọ, ọ hụrụ oriri na mkpu. le! ọ bụ nri Chigozie na Dora zoro.
Dị ka ụgwọ ọrụ maka Tony na-emeri egwuregwu, e mere ka ha mara ụlọikwuu ndú mgbe Kike doo a ikpeazụ ndụmọdụ maka Sandra na- ‘na-ya elu ma na-akwụsị ịbụ keonyeisi.’
Lezienụ anya maka anyị akụkọ ke akpatre na nwunye nke GUS8, Season 2.
GUS8 Episode2: …na ya gaa nke ọma n'ihi na 'mopo’